Ronzanzanga - Wikipedia
(Redirected from Uronzanzanga)
Izwi rokuti ronzanzanga riri kushandiswa pachinyorwa chino kuturikira chinonzi sociology kuEnglish. Ronzanzanga chidzidzo chinobata zvinosanganisira: mugariro wenzanga; kuvamba kunoita nzanga; kukura kwadzo; kurongeka kwadzo uye masangano ari madziri. Chidzidzo ichi chinoshandisa nzira dzakatsaukana dzekuwana umbowo nenzira dzekuwongorora kuti pabatanidzwe denhe reruzivo pamusoro pezvinhu zvinoti: kugadzikika kwenzanga; kusagadzikika kwenzanga uye shanduko dzinoitika munzanga. Ana Chironzanzanga vazhinji vanoita tsvakurudzo dzinokwanisa kushandiswa kuumba mirawu nerugurupiro munzanga. Vamwewo ndivo vanonangana nekunatsurudza kunzwisisa dzidziso dziri pamusoro petsandura dzenzanga. Madingindira anocherechedzwa anosanganisira nhau dzinobata vanzanga nokudyidzana kwavo uye nhau huru dzinobata madandira enzanga nemapazi adzo.
Izwi rokuti kuronza (to tell, to explain, to relate) rinoreva kutaura zvakajeka zvinonzwisisika. Saka tikati ronzanzanga zvinoreva kuti chidzidzo ichi chakasvika pakutsanangurwa kwakajeka uye kuchinzwizisika. Shoko chairo richapfumbira harisati ranatsa kubuda pachena, parizvino Shoko rokuti ronzanzanga rinodudzira zvimwechete nokuti duranzanga.
Shoko rokuti kudura (to reveal, to mention, to interpret) rinoreva, kutaura kana kutsanangura kunoburitsa pachena zvakavandika kana zviri kurehwa - pano takanangana nekunobuditsa pachena zvose zvinozivikanwa maererano nemusoro wenyaya iri mudariro. Apa ndipo pabva chivakamberi chokuti dura-. Chivakamberi ichi chiri kushandiswa kuturikira chivakashure cheEnglish chinoti -logy chinoreva a speaking, discourse, treatise, doctrine, theory, science".
-dara (be clear, understandable - of speech) zvichireva kutaura zvakajeka zvinonzwisisika. Zvichida izwi iri rinokwanisa kuturikira chivakamberi -logy.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Ronzanzanga&oldid=51746"
This page was last edited on 10 Gunyana 2017, at 19:15.